Video: Nghọta Twitter | Martech Zone
Wenezdee, Machị 12, 2008 Tuzdee, Machị 11, 2008 Douglas Karr
M dere banyere Twitter obere oge laghachi, ma vidio a na-etinye ya n'ọnọdụ dị ukwuu. Soro m na http://www.twitter.com/douglaskarr.
Tags: ule saịtị
Vidiyo adịghịzi adị. 🙁
Agbanyeghị na isiokwu nke microblogging: Agbalịrị m ọrụ ole na ole dịka Twitter na tumblr, ahụghị m ihe na-adọrọ mmasị gbasara ha. Ma eleghị anya, ọ bụ naanị m, enwere m oge siri ike na-abịa na ngwongwo na blọgụ m zuru oke obere iwepụta ihe kwa elekere ma ọ bụ karịa site na microblog.
Ọ dị ka ọ lọghachila ugbu a, na-amaghị ihe merenụ.
Micro-ịde blọgụ bụ egwu siri ike, ọkachasị maka ụmụ okorobịa dị ka m na-arụ ọrụ maka ndụ. 🙂 Enweghị m oge ide ihe n’ala ụbọchị niile. Echere m na ọ bụ ihe ọzọ banyere 'akọrọ ozi'. Ahụrụ m ọtụtụ ọmarịcha ozi mgbe m lere ya anya iri na abụọ ogologo ụbọchị.
Enweghị m oge iji jide mkparịta ụka ebe ahụ - mana ọtụtụ ezigbo ihe na-agafe. NA ọ na-enyere m aka iche echiche maka echiche maka akwụkwọ ndị na-abịanụ.
Achọtara m blog gị site na okwu ị hapụrụ na Buzz Marketing. Ahụrụ m vidiyo vidiyo na-ahụkarị aka n'anya - ha mebiri teknụzụ ọhụụ bụ ụzọ dị mfe nghọta ma ọ na - enyere m aka ịkọwa ya ndị enyi na ndị ọrụ ibe m. Daalụ maka ikenye nke a banyere twitter - M twitter ma ugbu a, m ghọtara ihe mere m ji twitter!